नेपाल टेलिकमले ल्यायो यस्तो अफर, के–के छन् छुट अफरका विशेषता ? - Experience Best News from Nepal
नेपाल टेलिकमले ल्यायो यस्तो अफर, के–के छन् छुट अफरका विशेषता ?
प्रकाशित मिति : शनिबार, चैत्र ३०, २०७५
नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक स्प्रिङ अफर घोषणा गरेको छ । यो अब शनिबारदेखि ९० दिनसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यकाअनुसार कम्पनीले एक घण्टा अनलिमिटेड प्याकको घोषणा गरेको छ । यस प्याक अन्तर्गत कम्पनीकै नेटवर्कमा जीएसएम÷सीडीएमएका ग्राहकले २० रुपैयाँमा प्याक एक्टिभ भएपश्चात् १ घण्टासम्म निरन्तर भ्वाइस, एसएमएस र डाटा असीमित रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यसका अलावा दश मिनेटको थप बोनस गरी जम्मा ७० मिनेटसम्म असिमित भ्वाइस÷डाटा÷एसएमएस प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यस्तै जीएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँ देखि ९९० रुपैयाँसम्मका प्याक उपलब्ध छन् ।
यस अन्तर्गत २८ एमबी देखि १२ जीबीसम्मका प्याकेज खरिद गर्न सकिने छ । यी प्याकेज प्रयोग गर्न सकिने समयावधि पनि १ दिन देखि ४२ दिनसम्म हुनेछ । साथै इकोनोमी प्याकको रुपमा एक दिनका लागि २५ रुपैयाँको १०० एमबी, ७ दिनका लागि १०० रुपैयाँको ५०० एमबी र २८ दिनका लागि ५०० रुपैयाँको ४५०० एमबी भोल्युमको इको प्याक समेत उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ।
यस्तै टेलिकमले डे डाटा प्याक अन्तर्गत ९ रुपैयाँमा विहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म एक दिनका लागि ५५ एमबी डाटा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी १ जीबी पर डे डाटा प्याक अन्तर्गत ४५ रुपैयाँमा १ दिनका लागि १ जीबी डाटा भोल्युम उपलब्ध हुनेछ भने नाइट डाटा प्याक अन्तर्गत एक रातका लागि ९ रुपैयाँमा १२५ एमबी र ७ रातका लागि ४५ रुपैयाँमा ६३० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । यो प्याक राती ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने छ ।
यस्तै टेलिकमले अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक अन्तर्गत १ रातका लागि १५ रुपैयाँमा र ७ रातका लागि ८५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने पनि जनाएको छ ।
यस्तै सोसियल मिडिया डाटा प्याक अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र ट्वीटर चलाउन सकिने छ । यस अन्तर्गत ६ रुपैयाँमा ३६ एमबी डाटा १ दिन, ३० रुपैयाँमा १५० एमबी डाटा ३ दिन र ६० रुपैयाँमा ३२५ एमबी डाटा ७ दिनका लागि चौवीसै घण्टा उपलब्ध हुनेछ ।
यसरी डाटा स्ट्रिमिङ प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा १५० एमबी डाटा १ दिनका लागि, ३० रुपैयाँमा ४०० एमबी डाटा ३ दिनका लागि र ६० रुपैयाँमा ९०० एमबी डाटा ७ दिनका लागि चौवीसै घण्टा उपलब्ध हुने छ ।
यस्तै टेलिकमले अल टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँ देखि ५०० रुपैयाँसम्मका प्याक उपलब्ध गराएको पनि जनाएको छ ।
यस्तै टेलिकमले आकर्ष नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक, डे टाइम भ्वाइस प्याक, एसएमएस प्याकमा पनि आकर्षक अफर ल्याएको छ । यस्तै कम्पनीले ‘नेपाल टेलिकम’ एप पहिलो पटक डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नेहरुका लागि १०० एमबी जीएसएम डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा नेपाल टेलिकमको ‘अफरै अफर, कसरी लिने त ?
मानसिक समस्या बढाउने खेल पब्जी आजबाट प्रतिबन्ध
मोबाइलमा बढी समय बिताउने बच्चाको मस्तिष्क पातलिन्छ – चिकित्सक
के तपाइँ पनि फेक फेसबुक अकाउन्ट चलाउदै हुनुहुँन्छ ? होसियार !!!